ဝိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၉) | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ၀ိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၈)
၀ိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၁၀) →
မေး ။ ဆရာကြီး မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ မင်္ဂလာပါ။
မေး ။ ဆရာကြီးကျွန်တော် နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေ သိချင်တယ် ဆရာကြီး။
ဖြေ ။ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေကတော့ အများကြီးပေါ့ – အဓိက ဂုဏ်ရည်ကတော့ လွတ်မြောက်ခြင်းလို့ ပြောရမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ “သမုဒ္ဒရာရေဟာ ငန်သော အရသာရှိသကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အရသာဟာ လွတ်မြောက်ခြင်း ရှိတယ်” လို့ ဓမ္မဒိန္ဒာက အဲဒီလို ဟောခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီတော့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်ဟာ လွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့။ တစ်ခြားဟာတွေက အများကြီးပေါ့ နိဗ္ဗာန်က ကောင်းတယ်မို့လား နိဗ္ဗာန်က သိမ်မွေ့တယ်၊ အသိခက်တယ်၊ နက်ရှိုင်းတယ်၊ နှိုင်းခိုင်းစရာ မရှိဘူး တို့ဟာ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေပါပဲ။
မေး ။ ဆရာကြီးရယ် ဂုဏ်ရည်တွေ ရှိတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် နိဗ္ဗာန်ကြီးကို အံသြမိတယ်။
ဖြေ ။ အဲဒီ အံသြတာလည်း နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တစ်ခုပဲ။ နိဗ္ဗာန်ဂုဏ်က အဲသြစရာ ကောင်းတယ်။ သူက အသင်္ခတကိုး – ဒီဘက်က (၃၁) ဘုံက သင်္ခတ၊ နိဗ္ဗာန်က အသင်္ခတဆိုတော့ ပြုပြင်စီရင်ခြင်းငှါ မအပ်ဘူးဆိုတော့ အံသြစရာ ကောင်းတာပေါ့။
မေး ။ ဆရာကြီး ကျွန်တော် တရားဘက်ကို တော်တော်လုသွားပြီနော် –
ဖြေ ။ ကောင်းတာပေါ့။
မေး ။ ဆရာကြီး ကျွန်တော် တရားပေါက်သွားရင် ဘယ်နှယ့်နေမလဲ —
ဖြေ ။ ဟာ တရားပေါက်သွားတော့ သာဓုခေါ်စရာ ကောင်းတာပေါ့။
မေး ။ အိမ်က မိသားစုရှိသေးတယ် ဆရာကြီးရဲ့။
ဖြေ ။ ဟာ မိသားစုလည်း ပြောခဲ့သားပဲ၊ သူတို့လည်း (Reflective Glory) ဆိုတာရှိတယ်လေ၊ သူတို့လည်း ပူးတွဲပြီးတော့ ကုသိုလ်ရတာပေါ့။ ဒါ ကောင်းတာလုပ်တာပဲ။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး၊ ကျွန်တော် သိပ်ပေါက်သွားရင် မိသားစုကို စောင့်ရှောက်မယ့်သူ မရှိမှာစိုးလို့။
ဖြေ ။ ဟာ ဒါကတော့ သူ့ တရားက စောင့်ရှောက်မှာပေါ့။ တရားပဲအရင် ကြိုးစားစမ်းပါဦး။ လာဘ်တွေ တအားမျှော်နေတော့ ဒါတွေက အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး၊ ကျွန်တော် စိတ်ကူးမိတာကို ပြောတာပါ ဆရာကြီး။ ကျွန်တော် စွန့်စွန့်စားစား ကြိုစားပါ့မယ်။
ဖြေ ။ ကြိုးစားပါ အောင်မြင်ခြင်းဟာ လက်တစ်ကမ်းပဲလေ။ ဒီတော့ သာသနာအတွင်းမှာ ကြိုးစား။ ကောင်းတဲ့ဘက်က စံနမူနာပြတာ သိပ်ကုသိုလ်ရတာပဲ။ ကြိုစားနော် သာဓုခေါ်တယ်။ တရားကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ သူတော်ကောင်းတွေက သာဓုခေါ်မှာပေါ့ –ဒါ ကြိုးစားသင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘော။ သူတော်ကောင်းတွေက ဟုတ်တာ မှန်တာ အကျိုးရှိတာ လုပ်ကောင်းတယ်တဲ့။ ဒီတော့ တရားကျင့်တာဟာ လုပ်ကောင်းတယ်။ ဒီတော့ ကြိုးစားပါ။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး ကျွန်တော် ကြိုးစားပါ့မယ်။ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ဂုဏ်ရည်တွေကိုလည်း ကျွန်တော် မကြာခဏ မှန်းဆ ကြည်ညိုပါ့မယ် ဆရာကြီး။
ဖြေ ။ ကောင်းပါတယ်။
မေး ။ ဆရာကွီး မင်ျဂလာပါ ခငျဗြာ။
ဖွေ ။ မင်ျဂလာပါ။
မေး ။ ဆရာကွီးကြှနျတျော နိဗ်ဗာနျရဲ့ ဂုဏျရညျတှေ သိခငျြတယျ ဆရာကွီး။
ဖွေ ။ နိဗ်ဗာနျရဲ့ ဂုဏျရညျတှကေတော့ အမြားကွီးပေါ့ – အဓိက ဂုဏျရညျကတော့ လှတျမွောကျခွငျးလို့ ပွောရမှာပဲ။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ “သမုဒ်ဒရာရဟော ငနျသော အရသာရှိသကဲ့သို့ နိဗ်ဗာနျရဲ့ အရသာဟာ လှတျမွောကျခွငျး ရှိတယျ” လို့ ဓမ်မဒိန်ဒာက အဲဒီလို ဟောခဲ့ဖူးတယျ။ ဒီတော့ နိဗ်ဗာနျရဲ့ ဂုဏျရညျဟာ လှတျမွောကျခွငျးပေါ့။ တဈခွားဟာတှကေ အမြားကွီးပေါ့ နိဗ်ဗာနျက ကောငျးတယျမို့လား နိဗ်ဗာနျက သိမျမှတေ့ယျ၊ အသိခကျတယျ၊ နကျရှိုငျးတယျ၊ နှိုငျးခိုငျးစရာ မရှိဘူး တို့ဟာ နိဗ်ဗာနျရဲ့ ဂုဏျရညျတှပေါပဲ။
မေး ။ ဆရာကွီးရယျ ဂုဏျရညျတှေ ရှိတယျဆိုတော့ ကြှနျတျော နိဗ်ဗာနျကွီးကို အံသွမိတယျ။
ဖွေ ။ အဲဒီ အံသွတာလညျး နိဗ်ဗာနျရဲ့ ဂုဏျရညျတဈခုပဲ။ နိဗ်ဗာနျဂုဏျက အဲသွစရာ ကောငျးတယျ။ သူက အသင်ျခတကိုး – ဒီဘကျက (၃၁) ဘုံက သင်ျခတ၊ နိဗ်ဗာနျက အသင်ျခတဆိုတော့ ပွုပွငျစီရငျခွငျးငှါ မအပျဘူးဆိုတော့ အံသွစရာ ကောငျးတာပေါ့။
မေး ။ ဆရာကွီး ကြှနျတျော တရားဘကျကို တျောတျောလုသှားပွီနျော –
ဖွေ ။ ကောငျးတာပေါ့။
မေး ။ ဆရာကွီး ကြှနျတျော တရားပေါကျသှားရငျ ဘယျနှယျ့နမေလဲ —
ဖွေ ။ ဟာ တရားပေါကျသှားတော့ သာဓုချေါစရာ ကောငျးတာပေါ့။
မေး ။ အိမျက မိသားစုရှိသေးတယျ ဆရာကွီးရဲ့။
ဖွေ ။ ဟာ မိသားစုလညျး ပွောခဲ့သားပဲ၊ သူတို့လညျး (Reflective Glory) ဆိုတာရှိတယျလေ၊ သူတို့လညျး ပူးတှဲပွီးတော့ ကုသိုလျရတာပေါ့။ ဒါ ကောငျးတာလုပျတာပဲ။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး၊ ကြှနျတျော သိပျပေါကျသှားရငျ မိသားစုကို စောငျ့ရှောကျမယျ့သူ မရှိမှာစိုးလို့။
ဖွေ ။ ဟာ ဒါကတော့ သူ့ တရားက စောငျ့ရှောကျမှာပေါ့။ တရားပဲအရငျ ကွိုးစားစမျးပါဦး။ လာဘျတှေ တအားမြှျောနတေော့ ဒါတှကေ အလုပျမဖွဈပါဘူး။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး၊ ကြှနျတျော စိတျကူးမိတာကို ပွောတာပါ ဆရာကွီး။ ကြှနျတျော စှနျ့စှနျ့စားစား ကွိုစားပါ့မယျ။
ဖွေ ။ ကွိုးစားပါ အောငျမွငျခွငျးဟာ လကျတဈကမျးပဲလေ။ ဒီတော့ သာသနာအတှငျးမှာ ကွိုးစား။ ကောငျးတဲ့ဘကျက စံနမူနာပွတာ သိပျကုသိုလျရတာပဲ။ ကွိုစားနျော သာဓုချေါတယျ။ တရားကွိုးစားတယျဆိုတော့ သူတျောကောငျးတှကေ သာဓုချေါမှာပေါ့ –ဒါ ကွိုးစားသငျ့တယျဆိုတဲ့သဘော။ သူတျောကောငျးတှကေ ဟုတျတာ မှနျတာ အကြိုးရှိတာ လုပျကောငျးတယျတဲ့။ ဒီတော့ တရားကငျြ့တာဟာ လုပျကောငျးတယျ။ ဒီတော့ ကွိုးစားပါ။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး ကြှနျတျော ကွိုးစားပါ့မယျ။ နိဗ်ဗာနျရဲ့ ဂုဏျရညျတှကေိုလညျး ကြှနျတျော မကွာခဏ မှနျးဆ ကွညျညိုပါ့မယျ ဆရာကွီး။
ဖွေ ။ ကောငျးပါတယျ။
Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်
This entry was posted in Buddhism and tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်. Bookmark the permalink.
Total Visitors : 7426
Today Visitors : 92